HomeHoryaalladaLeicester City oo 10 sanno kadib ku soo noqotay Priemier League Iyo Damaashaadkii Gil-gilay magaaladaasi (Sawiro)
Magaalada Leicester ayaa u e kaatay sidii mawjada bada ee biyeheedu bulluga yihiin oo kale kadib markii kumanaan iyo kumanaan taageerayaasha naadiga Leicester City ah oo wata astaanta naadiga ee Buluuga ahi ay isugu soo baxeen shaaracyada magaalada si ay ugu damaashaadaan soo noqoshada naadigooda oo toban sanno kadib dib ugu soo noqday horyaalka the Premier League.
Ciyaaryahanada iyo kooxda tababarka ee kooxda Leicester City oo saaran baabuur bas ah oo dusha banaan ayaa socod ku soo maray guud ahaan xaafadaha ay ka kooban tahay magaaladaasi, aakhirkiina isugu soo biyo shubtay Fagaaraha Town Hall, oo uu safarkoodu ku ekaa si ay taageerayaasha ugala hadlaan halkaasi, farxada iyo rayn rayntana ugula qaybsadaan.
Naadiga tababare Nigel Pearson ayaa si xarago leh uga soo dhex mudhay kooxaha heerka labaad ee Ingiriiska kadib markii ay dhigeen rikoodh cusub oo ah 31 kulan oo ay badiyeen, horyaalka heerka labaadna (seria B) ku qaadeen dhibco dhan 102 dhibcood.
Markii ugu dambeysay ee naadigan lagu naanayso dacawadu ka soo qayb gallaan horyaalka Priemier League ayaa ahayd sanadii 2003, sanadkaas oo ay ku guulaysteen horyaalkii heerka labaad.
Leicester ayaa darajada labaad ku qaaday dhibco ka sareeya 9 dhibcood kooxdii kaalinta labaad ku guulaysatay ee Burnley oo ku wehelinaysa buuxinta booska Priemier League ee ay baneeyeen, Cardiff, Fulham iyo koox wali la sugayo.
Neuer :- Anigu Nigisyo ma xayaysiiyo sida Ronaldo
Waxaan xaq u leeyahay in mar 2 aad la i tijaabiyo Sida Dunga : Maradona
Rasmi – Febrigas Oo Si Rasmi Ah Ugu Biiray Chelsea ………..